မြန်မာ နိုင်ငံသား စစ်စစ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး | democracy for burma
မြန်မာ နိုင်ငံသား စစ်စစ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး
tags: BDC, Buddhism, Burma, Burma Democratic Concern, CALLS, Election, monks, Myanmar, VOTING RIGHT
မြန်မာ နိုင်ငံသား စစ်စစ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး ငါးသိန်း ကျော်ကို မဲ ပေးခွင့် မပြုဘဲ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ မှန်း မသိသူ တွေ မဲပေး ခွင့်ရှိ သော တိုင်းပြည်, နိုင်ငံသား မဟုက်သူများ မဲပေး ခွင့်ရှိ သော တိုင်းပြည်, ဘင်္ဂါလီ ဝှိုက်ကဒ်ကိုင်တွေ မဲပေး ခွင့်ရှိ ခဲ့ သော တိုင်းပြည် ဟာ ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံ ပါ။
မြန်မာ နိုင်ငံသား များ ခင်ဗျား မြန်မာ နိုင်ငံသား စစ်စစ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး အားလုံး မဲ ပေးခွင့် ရရေး ဝိုင်း ပြီး တောင်း ဆို ပေးကြပါ ခင်ဗျား ။
Burma Democratic Concern (BDC) calls for people of Burma to question why Burmese citizens 500, 000 Buddhist monks are not allowed to vote in national elections while ten of thousands of white card holders i.e. people with temporary resident card holders whose nationalities status are not verified yet whether they are eligible to be the Burmese citizens or not can vote in national elections.
← VOICE WEEKLY ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်တွင် ပုပ်ပွနေသော အမျိုးသားအလောင်းတွေ့
Myanmar to establish special immigration force in Rakhine →